Muhaajiriinta Libiya: Amnesty International oo eedeynaysa Midowga Yurub – Kasmo Newspaper
Muhaajiriinta Libiya: Amnesty International oo eedeynaysa Midowga Yurub
Updated - December 13, 2017 9:32 am GMT
London (Kasmo), Ururka Amnesty International ayaa ku eedeynaya Xukuumadaha Yurub in ay qayb ka yihiin hababka aadaminimada ka baxsan ee loola dhaqmo muhaajiriinta ku sugan xabsiyada Libiya.
Warbixinta Amnesty baahisay Talaadadii, 12kii Disember 2017, waxaa ku qoran in “Mas’uuliinta Yurb mar kasta la socdeen gaboodfallada iyo silcinta dadka Afrikaanka ah loogu gaysto gudaha Libiya. Iyaga oo sidoo kale taageerey gaboodfallada Ilaalada Xeebaha Libiya kula kacaan qaxootiga, si loo joojiyo qulqulka muhaajiriinta ku socota Yurub”.
Agaasimaha qaybta Yurub ee Amnesty, John Delhuisen, ayaa Xukuumadaha Midowga Yurub ka codsaday in ay dib u eegaan istrateejiyadooda dhanka socdaalka, una oggolaadaan qaxootiga in ay hab sharciyaysan ku soo garaan Yurub.
14kii Nofember 2017 Tvga CNN ayaa baahiyay muuqaallo laga arki karo muhaajiriin Afrikaan ah oo meel ku dhow Tripoli, sidii xoolihii loogu iibsanayo $400 oo Dollar, taas oo soo jiidatay dareenka Beesha Caalamiga ah.
Xoghayaha Guud ee Qarammada Midoobay, Antonio Guterres ayaa falka addoonsiga ku tilmaamay gef ka soo horjeeda aadaminimada, dalka Faransiiskuna wuxuu 29kii Nofember ka codsaday Golaha Ammanka, in tillaabo laga qaado ciddii ka dambaysay falalkaas.
Waxaa sidoo kale, ganacsiga addoomada cambaareeyay Ururka Midnimada Afrikaanka AU, isaga oo ka codsaday mas’uuliinta Libiya in ay tillaabo ka qaadaan.
Eedaha Amnesty International waxaa ka horreeyay kuwa Ururka Dhakhaatiirta MSF ee aan xuduudda lahayn, kuwaas oo 5tii September 2017, Guddoomiyahoodu, Joanne Liu warqad furan u dirtay mas’uuliinta Yurub.
Bishii xigtay, 9kii Oktoobar 2017, wargayska “The New Arab” ee fadhigiisu yahay London ayaa qoray in, Midowga Yurub oo ka duulaya xadaynta muhaajiriinta, uu taageeradiisa Rejiimyada Libiya, Sudan iyo Niger, si ay u joojiyaan qaxootiga, ku ciqaabayo difaaca xuquuqda aadanaha.